Tongà : Nampangaina Ho Nifehy Ny Haino Aman-jerin’ny Fanjakàna Mialoha Ny Fifidianana Ny Governemanta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Oktobra 2017 9:40 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, македонски, Français, 繁體中文, English
Foiben'ny Tonga Broadcasting Commission niorina tamin'ny 1961. Sary nampakarin'i Makutu ho ao amin'ny Wikipedia – Nafindran'i RoyFocker 12 avy amin'ny en.wikipedia ho amin'ny Commons tamin'ny fampiasàna ny CommonsHelper. Sehatra ho an'ny daholobe.
Nieraka sahoan-drsaka be ny hoe nihamafy ny fifehezan'ny governemanta ao Tonga ny haino aman-jery tohanan'ny fanjakana, taorian'ny fanavaozana ny Komitin'ny Tonga Broadcasting Commission (TBC). Nafindra tampoka any amin'ny departemantan'ny varotra sy ny haivarotra i Laumanu Petelo , tonian-dahatsoratry ny vaovao sy i Viola Ulakai, talen'ny filazàm-baovao. Nifanandrina tamin'ny Praiministra Akilisi Pohiva izy roa ireo rehefa nampangain'ity farany fa lasa fahavalon'ny governemanta ny TBC.
Nantitranterin'ny Praiministra fa tokony hanohana ny fandaharanasan'ny governemanta ny TBC, sady nampitandremany fa azony atao ny manome baiko amin'ny fisintahan'ny fanjakana aminy na hanidy ny tambajotrany.
Didy avy amin'ny lehiben'ny filankevi-pitantànana vao voatendry, Tu'i Uata, ny famindràna ireo tonian-dahatsoratra lehiben'ny tambajotra anankiroa ireo. Saingy nohamafisin'i Uata fa ny fatiantoka ara-bolan'ny TBC no antony nanafoanana ireo tonian-dahatsoratra ireo. Nampiany fa mety ho bankiropitra ny TBC ao anatin'ny roa volana raha tsy nisy ilay fanavaozana.
Fa hizingizinin'ny mpisolovava an'i Petelo sy Ulaka fa ao anatin'ny drafitr'asan'ny governemanta hifehezana ny TBC, herinandro vitsy mialoha ny fifidianana solombavam-bahoaka kasaina hatao ny 16 Novambra ny fanavaozana ao amin'ilay trano famoaham-baovao.
Namoaka lahatsoratra mitovitovy hevitra amin'izany ny vondron'ny haino aman-jery tsy miankina Matangi Tonga Online :
Tena mazava be fa raisin'ny governemanta tanteraka ny fifehezana ny fampielezam-peom-panjakana mialoha ny fifidianana solombavam-bahoaka hatao amin'ny 16 Novambra, ampiarahana amin'ny fanapahan-doha ireo sampan-draharahan'ny filazam-baovao.
Nampian'ny Matangi Tonga Online fa ” nopotehin'ny filoha vaovao mpitarika ny TBC ny zon'ny TBC hiasa ho fampielezam-peom-panjakana mahatoky.” Nolaviny ihany koa ny hevitra fa tsy maintsy manohana an-jambany ny politikan'ny governemanta ny TBC :
Andrana tsy iadian-kevitra mba hamadihana ny alika mpiandry tanàna ho alika mpilelaka izany.
Miala tanteraka amin'ny tanjona ny lahateny tsara lahatr'ireo solotenam-panjakàna hoe “tokony hanohana ny governemanta” ireo fandrakofam-baovaon'ny TBC, satria orinasam-panjakàna izy. Tsy misy mpanao gazety matihanina mazoto hiasa ambany rafitra fifehezana politika tahaka izany.
Nampatsiahiviny ny governemanta ihany koa ny iraka ampanaovina ny TBC amin'ny maha-fampielezampeom-panjakana azy :
Tsy miankina amin'ny dokam-barotra sahala amin'ny fampielezam-peo ara-barotra ny fampielezam-peom-panjakàna. Izany dia hahafahan'ny fampielezam-peom-panjakana mampita ireo fandaharana izay tsy ho tafa mihitsy ara-barotra ho any amin'ny tsenam-bahoaka, toy ny fandaharana momba ny fanehoana ny raharaham-panjakana voalanjalanja tsara, fanadihadihana amin'ny fampielezam-peo sy fahitalavitra ary ireo fandaharana manabe izay raha tsy amin'io dia tsy ho afaka vokarina.
Mandritra izany fotoana izany, ny Pacific Freedom Forum (PFF) dia namporisika ny governemantan'i Tonga hanaja ny fahalalahan'ny haino aman-jery :
Mila atsahatry ny governemanta ny fampiasana ireo antsoina hoe fatiantoka ho toy ny fialantsiny hampiharana ny fanovàna manasazy mikendry ny hanafoanana ny trano famoaham-baovao sy ny fitantanana any amin'ny iray amin'ireo fampielezam-peom-panjakana fototra any amin'ny faritra.
Andraikitra fototry ny fampielezam-peon'ny Fanjakàna, izay tsy miatrika ireo tsindry momba ny tombombarotry ny fampielezam-peo ara-barotra, ny mampahafanatra ny vahoaka ny zava-mitranga amin'ny hetran'izy ireo.
Lazain'ny Talen'ny PFF, Monica Miller hoe “mpisavalàlan'ny asa fanaovan-gazety aty Pasifika” ireo vehivavy roa tonian-dahatsoratry ny TBC :
Ketraka tamin'ny filalaovana ireto vehivavy roa mpanao gazety izay tsy nanao afa-tsy ny asa fanaovan-gazety ireto ireo mpiara-miombon'antoka, na aiza na aiza, amin'ny haino aman-jerin'i Pasifika.
Laumanu sy Viola no mpisavalàlana mpitarika amin'ny asa fanaovan-gazety any Pasifika izay tsy matahotra ny mametraka fanontaniana henjana, ary mbola mametraka ny zon'ny vahoaka hahalala mialoha. Am-pitiavana no anaovan'izy ireo ny zavatra ataony sy iatrehany ireo sakana ara-kolontsaina ary ireo fitsaratsaram-poana atao amin'ny vehivavy any amin'ny trano famoaham-baovao any Pasifika nandritra ny am-polo taona maro.
Nomarihin'ny vondron'ny haino aman-jery any amin'ny faritra fa misy didy manohana ny fahalalahan'ny fanehoankevitra ny lalàm-panorenan'i Tongà. Nandrisika ny governemantan'i Tongà io vondrona io mba hiresaka amin'ny haino aman-jery mba handamina ireo olana mikasika ny tatitra tsy marina sy ny sivana fa tsy hampiasa fihetsika famaizana.